Ukulwa okwangoku 5: I-trailer emnyama icinyiwe | IPhone iindaba
UAlex Ruiz | | IPhone imidlalo
Inkampani yemidlalo yevidiyo yezixhobo eziphathwayo Gameloft ikhuphe ividiyo entsha njenge-trailer ebonisa iziboniso ezivela ekukhululweni kwayo okulandelayo, Modern yokuThintela 5: ifowu-. Umdlalo uya kukhutshwa kuzo zombini izixhobo ze-iOS kunye ne-Android ngoLwesine olandelayo. 24 ngoJulayi Kwaye iqinisekile ukuba iya kufikelela ngokukhawuleza kwizikhundla eziphezulu kuluhlu lwezona zicelo zintlawulo zikhutshelweyo. Njengoko sibona kwividiyo, inkampani iyenzile Isixa sesihlanu sesaga Ukulwa kwamhlanje ngeedosi ezinkulu zezenzo kunye nemizobo ekhangayo. Njengeenguqulelo zangaphambili, siya kuboniswa ngeendlela ezimbini zokudlala, ongatshatanga kunye nabadlali abaninzi.
Ukongeza kwibali elitsha, i-Modern Combat 5: Blackout imile ikakhulu kuyo imizobo ephuculweyo, Ukwenza into engacingekiyo kuthi sonke ukuba sibuyela emva kwiminyaka, ukuze sikwazi ukudlala umdlalo wevidiyo kunye ne-smartphone okanye ithebhulethi yethu enomgangatho obonakalayo ngokungathi sisikhululo somdlalo wevidiyo olandelayo. Enye into entsha eya kwamkelwa kakuhle ngumxholo we squadsUkufikelela kubadlali abangama-20 kuluhlu lwabahlobo abanokudala nabo imidlalo eyenzelwe wena, njengoko kunjalo ngemidlalo yeekhonsoli zevidiyo ezinje ngeDabi lomlo okanye Umnxeba woMsebenzi.
Ukulwa okwangoku 5: Ukucinywa komnyama kubandakanya iiklasi ezine zabalinganiswa ukhetho lwethu lwabadlali abaninzi, njengoko benjalo ijoni, umkhweli, umpu y sniper njengoko zilungele umdlalo wethu wokudlala. Ngaphandle kwamathandabuzo eli fakelo elitsha liza kuba yimpumelelo kwaye sinokuba phambi kwakhe Eyona FPS ye-iPhone kunye ne-iPad. Iya kubizwa ngexabiso 5,99 euro, njengentlawulo yexesha elinye, njengoko ingabandakanyi ukuthenga kwangaphakathi nohlelo. Siza kukugcina unolwazi xa umdlalo ufumaneka kwiVenkile yeVenkile yokukhuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » IGameloft ipapasha itreyila yoLuhlu lwale mihla: 5
Umdlalo omnandi, ndiyayidlala kwaye iyamangalisa
URafael Alfonzo Valero Abarca sitsho
UAlex! Uyikhuphele njani ukuba iya kuthengiswa ngoLwesine we-24 olandelayo ???
Phendula kuRafael Alfonzo Valero Abarca
Umbuzo wokugqibela uAlex! Singakanani isithuba (MB / GB) esihlala kwifowuni?
Ihlala kwi-1 Gb kunye nomhlobo omncinci
Ngaba iyasebenza i-aleex? Ngaba uyabaxhasa abalawuli be-mfi?
Andibathumeli akukho nto ngoku mhlobo, kuthekani ukuba umdlalo usebenza kakuhle ukuba kukho ingxaki
IFayile yeFayile Umphathi: okhuphisana ngqo ne-iFile (Cydia)